Wasiirka Warfaafinta oo shaaciyay in dabayaaqada bishan uu furmi doono shir muhiim u ah Afka Soomaaliga – Radio Muqdisho
Wasiirka Warfaafinta oo shaaciyay in dabayaaqada bishan uu furmi doono shir muhiim u ah Afka Soomaaliga
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Eng, Cabdiraxmaan Cumar Cismaan “Yariisow” ayaa kulan looga hadlayey sidii loo daah-furi lahaa madasha lagu xoojinayo Afka Soomaaliga la qaatay mas’uuliyiin ka socotay Akadeemiyad gobolleedka Afka Soomaaliga iyo guddoomiyaha guddiga Warfaafinta ee Golaha shacabka.
Horraanta kulanka ayaa looga hadlay doorka Wasaaradda ee dhinaca wacyigelinta Af Soomaaliga iyo in la bilaabo barnaamijyo lagu kobcinayo Afkeenna, Guddoomiyaha Guddiga Warfaafinta, Dhaqanka iyo Isgaarsiinta ee Golaha Shacabka Soomaaliya Xildhibaan Khaalid Macoow ayaa Wasiirka Warfaafinta Guddoonsiiyey Warqad mahadcelin iyo boggaadin ku aaddan doorka wada shaqeyn ee Wasaaradda iyo Guddiga.
Kulanka waxaa joogey Xildhibaanno golaha shacabka ah, Agaasimaha Telefishinka Qaranka Saraakiil ka socotay Akadeemiyad gobolleedka Afka Soomaaliga AGA.
Qeybta labaad ee kulanka ayaa lagu falan-qeeyey sidii loo abuuri lahaa loona dardargelin lahaa madasha kor u qaadidda Af Soomaaliga oo dabayaaqada bishan ka furmi doona magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Guddiga Warfaafinta, Dhaqanka iyo Isgaarsiinta ee Golaha Shacabka Soomaaliya Xildhibaan Khaalid Macoow ayaa u mahadceliyey Wasiirka iyo Wasaaradduba sida joogtada ah ee ay ula shaqeeyaan Guddiga, iskana kaashan doonaan arrimaha Dhaqanka iyo xoojinta Afka Hooyo.
Ugu dambeyn Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) ayaa sheegay in 28-ka bishan la furi doono madasha Akameediyada Afka Soomaaliga ee AGA, taas oo bilow u ah barnaamijyo lagu xoojinayo Af Soomaaliga.
Arday dhameysatay tababar xirfado shaqo lagu barayay oo shahaadooyin la gudoonsiiyay “SAWIRRO”
Shir ku saabsan dhismaha Gole deegaan oo ay yeeshaan Baydhabo iyo Baraawe oo la daah furay